ပါရီတိုနိယာမဆိုတာ ဘာလဲ? ၎င်းက သင့်ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲစေနိုင်သလဲ? - Lifestyle Myanmar
ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်တွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ ‘အချိန်မလောက်လို့၊ အချိန်မရ’လို့ ဆိုပြီးအချိန်ပေါ်မှာ အပြစ်တင်လေ့ရှိကြသော်လည်း အမှန်က ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ ဒီအချိန်ကို ပညာရှိနည်းနဲ့ ဘယ်လိုသုံးစွဲရမှန်းမသိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွက် နာရီထပ်တိုးဖို့ နည်းလမ်းမရှိသော်လည်း အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရရှိနေတဲ့အချိန်တွေကနေ အများဆုံးရယူဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပါရီတိုနိယာမက များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
ပါရီတိုနိယာမကို လေ့လာတွေ့ရှိချက်က ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ လူဦးရေအကြား ဆက်နွယ်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ပါရဗီလ်ဖရက်ဒိုပါရီတိုဟာ အီတလီစီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အီတလီနိုင်ငံရှိ မြေယာ ၈၀% ကို အီတလီမိသားစုတွေရဲ့ ၂၀% က ပိုင်ဆိုင်ထားတာကို သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ဒီ ၂၀/၈၀ စည်းမျဉ်းကို သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာအားလုံးမှာ စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံစံက ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆို၊ ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်ပုံရပါတယ်။
၂။ ကြိုးစားမှုရဲ့ ၂၀% က ရလဒ် ၈၀% ကိုရရှိစေပါတယ်
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးက အတွေးအခေါ်တိုင်းကို အသက်ဝင်စေဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းများစွာ ပေးထားတာကို နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက အစပိုင်းမှာ ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပါရီတိုနိယာမကို လိုက်နာပါက ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းရဲ့ ၂၀%က ရလဒ်ရဲ့ ၈၀% ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ယနေ့ သင်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အရာ ၁၀ခုအနက် ၈ခုက အရေးမကြီးပါဘူး။ သင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာက ဒီအရေးကြီးဆုံးအရာ ၂ခုက ဘာလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပြီး သူတို့နဲ့ စတင်ပါ။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ၂၀% ကိုအာရုံမစိုက်ပါက သင့်ရဲ့အချိန် ၈၀% ကိုဖြုန်းတီးမိခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဘာက အရေးကြီးလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုသိမလဲ?
ဒါက စိတ်အားကောင်းသူဖြစ်ဖို့ သင်လိုအပ်လိမ့်မယ့်အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအရာ ၂ခုက အခက်ခဲဆုံးနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လူ့ဦးနှောက်ကို ကြိုးနဲ့ချည်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာ အချိန်ဆွဲရတာကို ကြိုက်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားထုတ်မှုနဲ့ စွမ်းအင်ကို ကျွန်တော်တို့အတွက် အမှန်တကယ် အရေးပါတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်အစား အရေးမပါတဲ့ အရာတွေကို အချိန်အနည်းငယ် လုပ်လိုကြပါတယ်။
၄။ သူတို့ကို ငါတွေ့ပြီ၊ နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲ?
စတင်ဖို့ နေရာကောင်းတစ်ခုက မနက်ဖြန်အတွက် ထိပ်တန်းဦးစားပေး (၆)ချက်ကို ချရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးရင် အောက်ဆုံး၅ချက်ကို ခြစ်ပစ်ပါ။ သင့်ရဲ့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ထိပ်တန်းဦးစားပေးကို မှတ်စုပေါ်မှာ ချရေးပါ၊ သင်အမြဲတမ်း မြင်နေရမယ့်နေရာမှာ ကပ်ထားပါ။
ဒီအလုပ်ကို မနက်တိုင်း တစ်နာရီ/နာရီဝက်လောက် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဘာကိုမဆို အာရုံမပျံ့လွင့်ပါစေနဲ့။ သင့်မှာရှိတဲ့ အခြားအလုပ်တွေကို စဉ်းစားဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ တစ်ခုခုကို သင့်စိတ်ထဲက ထုတ်မရဘူးဆိုရင် ချရေးထားပြီး နောက်မှပြန်လာပါ။
၅။ Freelance အလုပ်က ကိုယ့်အတွက် အချိန်ပိုရပေမယ့် ၂၄နာရီ/တစ်ပတ် လုပ်ရပါတယ်
သင် Freelance လုပ်မယ်ဆိုရင် ဆေးကုသမှုခံစားခွင့်၊ ဖျားနာနေတဲ့ နေ့ရက်တွေအတွက်လစာ၊ လစာ၊ အငြိမ်းစားစုငွေနှင့် တခြားဝန်ထမ်းအများစုလို အခွင့်အရေးနဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာ အားနည်းချက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကြက်ဥတွေအားလုံးကို တောင်းတစ်တောင်းထဲ ထည့်လိုက်ဖို့ မစွန့်စားတာကြောင့် ပရောဂျက်တွေကို ပိုပိုပြီး လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
သို့သော် သင့်ပရောဂျက်တွေရဲ့ ၈၀% ဟာ အမြတ် ၂၀% ကိုသာ ရရှိစေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့အဓိက ငွေရှာဖောက်သည်တွေပေါ်မှာ focus ထားမယ်ဆိုရင် ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးကို စုပြုံလုပ်နေမယ့်အစား သူတို့နဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။
ကြိုးစားအားထုတ်မှု ၂၀% ကိုသာ ထည့်ခြင်းဖြင့် အမြတ် ၈၀% ကိုရလာပါလိမ့်မယ်။
၆။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လည်ပတ်ခြင်း
စတိဗ်ဂျော့စ်ဟာ ပါရီတိုနိယာမအကြောင်းကိုလည်း သိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါက သူ့ကုမ္ပဏီကို ဒေဝါလီခံရခြင်းမှတောင် ကယ်တယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြံပေးချက်က ဟောင်းနွမ်းနေပုံရပေမယ့် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဖို့ အခက်အခဲရှိပါက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ရာနဲ့ချီသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို လိုက်ဖမ်းနေတာ ရပ်တန့်လိုက်ပြီး သင့်ကုမ္ပဏီအား အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာအနည်းငယ်ကို Focus ထားဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
၇။ သန့်ရှင်းဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ
သင်ဟာ မန်နေဂျာတစ်ယောက် ဖြစ်ပါက ဘယ်ဝန်ထမ်းတွေက ရလဒ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထုတ်လုပ်ပေးသလဲဆိုတာကို ရှာဖွေဖို့နှင့် သင့်ရဲ့အကန့်အသတ်အချိန်ကို သူတို့အား စီမံခန့်ခွဲခြင်းပေါ်မှာ Focus ထားဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
သင့်အဝတ်ဗီဒိုထဲမှာ သင်ဘယ်တော့မှ မဝတ်ဆင်တော့မယ့် အရာတွေနဲ့ ပြည့်နေနိုင်ပါတယ်။ တစ်လကို အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လောက် သင်ဝတ်မယ့်အဝတ်အစား စာရင်းကိုပြုစုပါ၊ ကျန်အရာတွေကို ဖယ်ရှားပါ၊ သင်ဘယ်တော့မှ မဝတ်ဆင်မယ့်အရာတွေကို သတိပြုမိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်ဟာ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းတွေကို မေ့ထားပြီး ကွဲပြားခြားနားတဲ့ တခြားလူတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝန်းရံမယ်ဆိုရင် ၈၀% က သင်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ၂၀% သာ ဆောင်ကြဉ်းပေးတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။